जापानमा सपिङ्ग गर्दा पैसा बचाउने टिप्स | Japan Info - नेपाली
Japan Info > Japan Info - नेपाली > Nationwide > जापानमा सपिङ्ग गर्दा पैसा बचाउने टिप्स
जापान अनौठो संस्कृति र वर्क एथिकले गर्दा बस्न निक रोचक ठाउँ हो। आफ्नै भाषा, अंग्रेजीको न्युन प्रयोग अनि त्यो माथि भद्रता र शिष्टताको प्रचुरताले गर्दा सुरु सुरुमा त हजुर हरुलाई कतै गुम्सिएको महसुस पनि भएको होला। समय संगै यहाको चाल ढाल पनि सिक्दै जानु हुनेछ। तर जापान आएर बस्न थाल्ने बित्तिकै किनमेल नगरी जिबन चल्दैन। यहाँ सबै थोक किन्नु पर्छ। नेपालीहरुलाई त झन् यहाँको भाउ निक महँगो लाग्न सक्छ। हुन पनि नेपालको बजार मूल्य संग दाज्ने हो भने मोलमा आकाश जमिनको अन्तर देखिन्छ। त्यसैगरी किनमेल वा सपिङ्ग जापानी मानिस र यहाँको संस्कृति संग घुलमिल हुने राम्रो माध्यम पनि हो। आज हामि हजुरहरुलाई जापानमा किनमेल गर्दा ध्यान दिनु पर्ने केहि टिप्सहरु बताउनेछौ।
१. माई ब्याग वा एको ब्यागको प्रयोग
जापानको केहि सुपरमार्केटमा सपिङ्ग गर्दा ब्यागको छुट्टै पैसा तिर्नु पर्छ। धेरै महँगो नभएपनि यदि हजुरले आफैले ब्याग लानु भयो भने त्यो पैसा बचाउन सक्नु हुनेछ। प्लास्टिकको पैसा सुपरमार्केटले आफ्नो फाईदाको लागि भन्दा पनि ग्राहकहरुलाई प्लास्टिक ब्यागको प्रयोग निरोत्साहित गर्न लिईएको हो। प्लास्टिक ब्यागले वातावरणमा नराम्रो असर गर्ने भएकोले एको(eco) ब्यागको प्रयोग गर्नु राम्रो हो। कुनै कुनै सुपरमार्केटले एको ब्याग प्रयोग गर्नेलाई पोइन्ट पनि दिन्छन। त्यो पोइन्ट हजुरले पछि त्यहि समान किन्न युज गर्न सक्नु हुनेछ।
जापानीमा प्लास्टिक ब्यागलाई फुकुरो भनिन्छ। क्यासिअरको स्टाफले फुकुरो वा ईरिमास्का भनेर सोध्दा “ईए ईरिमासेन (चाहिदैन) वा हाई ओनेगाईसिमास (दिनुहोस)” भन्न सक्नु हुनेछ। प्लास्टिकको ब्याग हजुरले पछि फाल्नेनै हुनाले आफ्नै ब्याग लिएर सपिङ्ग जाने बानि बसाल्नुहोस्।काउन्टरमा हुने पातलो प्लास्टिक चाहि झोल जन्य सामान प्याक गर्न हो। यसको पैसा पर्दैन।
धेरै नेपालीलाई जापानमा बार्गेन गर्न नमिल्ने जस्तो लाग्छ। हुन पनि जापानमा रेगुलर मार्केट जस्तै मल वा डेपर्ट्मेण्टल स्टोरमा बर्गेन चल्दैन। सबै प्राईस फिक्स्ड हुन्छन। तर हाट बाजारमा वा गल्लिको बजारमा बार्गेन चल्छ। जापानी मात्र नभएर एस्तो बजारमा बिदेशीहरुले पनि मोलमोलाई गर्न मिल्दछ। म आफैले पनि त्यस्तो फ्ली मार्केटमा एउटी चिनी महिलाले १०००० को लुगा ७०००मा बार्गेन गरेर लिएको देखेको छु। सुन्दा अचम्मको कुरा तर हजुरपनि यदि यस्तै बजारमा सपिङ्ग गर्दै हुनु हुन्छ भने बार्गेन गरि हेर्नुहोस्।
३. पोइन्ट कार्ड
नेपालमा पोइन्ट कार्डको सिस्टम केहि स्टोरमा भएतापनि त्यति ब्यापक छैन। तर जापान भनेको पोइन्ट कार्डको देश भन्दा पनि हुन्छ। ग्राहकलाई यहाँ भगवान मानिन्छ। कुनै पनि स्टोरले उही ग्राहक फेरी उसैकोमा सपिङ्ग गर्न आओस भन्ने चाहन्छ। त्यहि कुराले यो पोइन्ट कार्डको सिस्टम सुरु भएको हो। जापानमा ठूलो ठूलो मल देखि सानो रामेन पसल सम्ममा पोइन्ट कार्ड हुन्छ। पोइन्ट भनेको हजुरले एउटा पसल वा त्यो पसलको चेन स्टोरमा किन्दा जम्मा हुने ई-मनि जस्तै हो।
धेरै जसो सुपरमार्केटहरुले २०० यनको सपिङ्गमा १ पोइन्ट दिन्छन। त्यो जम्मा भएको पोइन्ट हजुरले पछि त्यहि स्टोरमा पैसा जसरि प्रयोग गर्न सक्नु हुनेछ। कहिले पोइन्ट डबल हुने अफर त कहिले थप पोइन्ट जम्मा हुने अफरहरु भई रहने हुनाले हजुरले सोचेको भन्दा चाडो पोइन्ट जम्मा गर्नु पर्ने हुन्छ। त्यसैले पोइन्ट कार्ड बनाउन झ्याउ नमान्नुहोस। यो कार्ड धेरै फाइदाको कुरा हो।
४. सुपरमार्केटको डिस्काउन्ट
हामीले यो भन्दा अगाडीको बेन्तोको लेखमा पनि जापानको सुपरमार्केटमा विभिन्न तयारि खानाहरु पाइने उल्लेख गरेका छौ। यी स्टोरका तयारि खानाहरु फ्रेश हुन्छन। तर यदि यी सामान केहि घण्टामा बिकेन भने यसको मूल्य कम हुदै जान्छ। जति समय बढ्दै जान्छ त्यतिनै मूल्य पनि घट्दै जान्छ। यो खाना वेस्ट नहोस भनेर गरिन्छ। यी खाना खराब भएका भने पक्कै होइनन। यदि हजुर सुपरमार्केट बेलुकी पख जानु भयो भने बेन्तोहरुमा ५० % छुट सम्म पाईन सकिन्छ।
प्राईस डाउन भएका खाना हरुमा माथि चित्र मा देखाईएको जस्तै पहेलो स्टिकर टासेर यति % छूट लेखिएको हुन्छ। यदि हजुर त्यहि दिन खानु हुन्छ भने पक्कै प्राईस डाउन भएका खानाहरुमा आखा घुमाउनुहोस्। हजुरले राम्रो पैसा बचाउनु हुनेछ। तयारी खानाहरुमा मात्र नभई एक्स्पाईरी मिती नजिकिएको समानहरुमा पनि प्राईस डाउनको स्टिकर लगाईएको हुन सक्छ। यदि हजुर त्यो समानको प्रयोग एक्स्पाईरी मिती भन्दा चाडै खपत गर्नु हुनेछ भने पक्कै लिनुहोस्।
५. ट्याक्स फ्री
हजुरले जापानमा थुप्रै ठाउमा ट्याक्स फ्री लेखिएका पसलहरु देख्नु हुनेछ। तर विडम्बना बाहिर लेखिए जस्तो त्यति सजिलै ट्याक्स फ्री हुने भने होइन। यी कर तिर्नु नपर्ने सुबिधा जापान कम अबधिको लागि आएका बिदेशीहरुको लागि हो। जापानमा समान किन्दा ८% कर तिर्नु पर्ने हुन्छ। तर यदी हजुर जापान आउनु भएको ६ महिना भित्र मा फर्किनु हुन्छ भने हजुरले कर तिर्न नपर्ने हुन सक्छ। त्यस को लागि हजुर ले आफ्नो पासपोर्ट लिएर स्टोर जानु पर्ने हुन्छ। कर नतिर्नको लागि हजुर ले किन्नु वएको समान ५००० एन भन्दा माथि र ५००००० एन भन्दा मुनी को हुनु पर्छ। ट्याक्स छुट बिजिनेस र कमर्सियल प्रयोगको लागि किनेको सामानमा भने हुन्न। पासपोर्ट चाहि लान नबिर्सिनुहोस। पासपोर्टको फोटो वा फोटोकोपी मान्य हुँदैन।
६. ड्रग स्टोरको डिस्काउन्ट कुपन
यदि हजुरले ट्याक्स फ्री सपिङ्ग गर्न मिल्दैन भने स्टोरमा बाडिने कुपनको ’boutमा बुझ्नुहोस्। यस्तो कुपनहरु ड्रग स्टोरहरुमा धेरै पाईन्छ। दिउसो तिर ड्रग स्टोरका स्टाफहरु स्टोर अगाडी बसेर डिस्काउन्ट कुपनहरु बाडिरहेका हुन्छन। ति कुपनहरु धेरै जसो त्यहि दिन मात्र प्रयोग गर्न मिल्ने हुन्छन। कुनै कुनै कुपन १५% सम्म डिस्काउन्ट हुने हुनाले नजरअन्दाज नगर्नुहोस्। ड्रग स्टोर मात्र नभई यस्ता कुपन ईलेक्ट्रिक पसलहरुमा पनि बाडिन्छ। यी कुपनहरु जम्मा गर्नुहोस् एक अर्का संग दाज्नुहोस्। जुन सस्तो र पायक पर्छ त्यहि सपिङ्ग गर्नुहोस्।
यी टिप्सहरुले जापानमै जिबनयापन गर्नु हुने र जापान घुम्न आउनु भएका दुबैले अब देखिको सपिङ्गमा पैसा बचाउनुहुने आशा गर्दछौ। थोरै बचतले पनि हजुर त्यो पैसा अन्य कुरामा प्रयोग गर्न सक्नु हुनेछ।